manual breast enlargement pump – MM Online Shopping
breast cup size .. 4.5*4.3 inch
ရငျ​သား​သေး​နလေို့ စိတျ​ဓာတျ​ကြ​နသေူ​တှအေတှကျ​ သဘာဝအတိုငျး ရငျ​သားကို လှပ ကွီးထှားလာ​စဖေို့ MM မှာ ကငျြ့​စကျ​​လေး​တှေ ​ရောကျ​ ရှိ​နပေီ​နှျော​ ​စြေးနှုနျးသငျ့​တငျ့​ပီး သုံးရလှယျ​ကူတဲ့ အတှကျ​ လုံးဝ အဆငျ​​ပွေ​စမေဲ့ ကငျြ့​​စကျ​​လေးဖွဈ​ပါတယျ​ ကိုလိုခငျြ​တဲ့ အ​နထေားအတိုငျးအတာကို ​ငှကေုနျ​သကျ​သာ​စပေီး သဘာဝအတိုငျး ပုံ​ဖျော​လို့ရ​ပီ​နှျော
​ အသုံးပွုနညျး အညှနျး
၂ဖကျစလုံးပါတဲ့အတှကျ ဘယျကော ညာကောကို တခါတညျး အသုံးပွုလို့ရပါတယျ
လစေုပျပွှနျ နှငျ့ပိုကျကိုတပျပါ ရငျသားအရပွေားကို ပွောငျးဖွငျ့ဆှဲစုပျပါက အရပွေားယောငျယမျးမူ ကိုကာကှယျရနျအတှကျ နို့သီးခေါငျးတှငျ cold cream အနညျးငယျလိမျးပေးပါ
ပွောငျးနဲ့ဆှဲရငျ လေ အပွငျကို မထှကျစရေနျအတှကျ ရငျသားနှငျ့ပွောငျးကို ကှကျတိ နရောခထြားပေးပါ
လကျရှိအနအေထားကို တိုငျးတာပွီး ၁၀ ရကျ တခါ တိုးတကျမူကို ပွနျလညျ တိုငျးတာပေးပါ ။
Air controller ကို တှနျးပွီး လညေဈကိုငျးကို ဆှဲပါ .
ပွောငျးခှကျတှငျရှိသညျ လကျရှိအတိုငျးအတာထကျ 2cm ကွီးလာအောငျ ညဈပါ .. လကေိုထုတျဖို့အတှကျ air controller ကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ထုတျပွီး ရငျသားကို ဖွလြှေော့လိုကျပါ အထကျပါအတိုငျး ရငျသား တဖကျစီကို ၁၅မိနဈစီလုပျပါ မနကျ၁ ကွိမျ ည၁ကွိမျလုပျပါ မှတျခကျြ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးမြား အသုံးမပွုရ ရငျသားပွောငျးကို မိမိ တဦးတညျးသုံးပါ တခွားလူမြားနှငျ့ မမြှဝရေ အသုံးပွုသငျ့သော လူမြား ရငျသားပွားခပျြသောသူမြား ရငျသားအောကျတှဲကသြူမြား
ရင်​သား​သေး​နေလို့ စိတ်​ဓာတ်​ကျ​နေသူ​တွေအတွက်​ သဘာဝအတိုင်း ရင်​သားကို လှပ ကြီးထွားလာ​စေဖို့ MM မှာ ကျင့်​စက်​​လေး​တွေ ​ရောက်​ ရှိ​နေပီ​နှော်​ ​ဈေးနှုန်းသင့်​တင့်​ပီး သုံးရလွယ်​ကူတဲ့ အတွက်​ လုံးဝ အဆင်​​ပြေ​စေမဲ့ ကျင့်​​စက်​​လေးဖြစ်​ပါတယ်​ ကိုလိုချင်​တဲ့ အ​နေထားအတိုင်းအတာကို ​ငွေကုန်​သက်​သာ​စေပီး သဘာဝအတိုင်း ပုံ​ဖော်​လို့ရ​ပီ​နှော်
​ အသုံးပြုနည်း အညွှန်း
၂ဖက်စလုံးပါတဲ့အတွက် ဘယ်ကော ညာကောကို တခါတည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်
လေစုပ်ပြွန် နှင့်ပိုက်ကိုတပ်ပါ ရင်သားအရေပြားကို ပြောင်းဖြင့်ဆွဲစုပ်ပါက အရေပြားယောင်ယမ်းမူ ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် နို့သီးခေါင်းတွင် cold cream အနည်းငယ်လိမ်းပေးပါ
ပြောင်းနဲ့ဆွဲရင် လေ အပြင်ကို မထွက်စေရန်အတွက် ရင်သားနှင့်ပြောင်းကို ကွက်တိ နေရာချထားပေးပါ
လက်ရှိအနေအထားကို တိုင်းတာပြီး ၁၀ ရက် တခါ တိုးတက်မူကို ပြန်လည် တိုင်းတာပေးပါ ။
Air controller ကို တွန်းပြီး လေညစ်ကိုင်းကို ဆွဲပါ .
ပြောင်းခွက်တွင်ရှိသည် လက်ရှိအတိုင်းအတာထက် 2cm ကြီးလာအောင် ညစ်ပါ .. လေကိုထုတ်ဖို့အတွက် air controller ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထုတ်ပြီး ရင်သားကို ဖြေလျှော့လိုက်ပါ အထက်ပါအတိုင်း ရင်သား တဖက်စီကို ၁၅မိနစ်စီလုပ်ပါ မနက်၁ ကြိမ် ည၁ကြိမ်လုပ်ပါ မှတ်ချက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ အသုံးမပြုရ ရင်သားပြောင်းကို မိမိ တဦးတည်းသုံးပါ တခြားလူများနှင့် မမျှဝေရ အသုံးပြုသင့်သော လူများ ရင်သားပြားချပ်သောသူများ ရင်သားအောက်တွဲကျသူများ
Be the first to review “manual breast enlargement pump” Cancel reply
Pucci Pump (မအင်္ဂါ လှ​စေ​သောစုပ်​ခွက်​)
medicate stick မိန်းမကိုယ်ကျဉ်းဆေးတောင့်